Iintyatyambo - isibonakaliso esithatha indawo efanelekileyo kuyo yonke indawo. I-bouquet ekhethiweyo kakuhle, i-vase ekhethiweyo ikwazi ukuxelela ezininzi ngomnini wabo. Kwakhona, ezi zinto ezincinci kodwa ezibaluleke kakhulu ngaphakathi zingenza iimeko eziqhelekileyo. Ngokomzekelo, ukuba i-vase ne-bouquet of tulips, i-daffodils kunye ne-freesias ngokudibanisa namagatsha e-willow, i-alder okanye i-birch enesigxobhozo ibonakala kwindlu okanye iofisi etafuleni, wonke umntu uya kuba nomoya okhanyayo. Ukuthintana, ngobumnene kwaye entwasahlobo kuza kubheka iintyatyambo ze-snowprop, ezijoliswe kwi-sprig ye-spruce okanye ipineyini. Eyona nto ilungileyo yile ngqungquthela i-vase encinci. Olu lwakhiwo luya kukhumbuza uhlobo lokuvusa kunye nosentwasahlobo.
Kule nqaku siza kuzama ukujonga indlela yokwenza iindidi zeentyatyambo ezibukeka zihle, zisekuqaleni kwaye zihambelana.
Namhlanje iivases ziza kwiindidi ezahlukeneyo, imibala kunye nemifanekiso. Iimvasi ziba zide: i-oval, cylindrical, ivule phezulu; ezantsi: ezijikelezileyo, ezikwere, eziqhelekileyo, ezicwangcisiweyo. Kodwa ungakhethi umgca wemibala eqaqambileyo kunye nemihlobiso yemifanekiso, oku kunokutshintsha ingqalelo kwiintyatyambo ngokwazo. Kwakhona njengezitsha, sebenzisa i-snags engaqhelekanga kunye ne-weave ye-birch bark, ufaka ingxowa yamanzi kuwo.
Vase kunye neentyatyambo.
Kuzo nayiphi na imibala yeembasa zezinto zonke ezibomvu, eziluhlaza, ezimhlophe kunye ezimnyama ziya kuhambelana.
I-Crystal, iifesi zeglasi kunye nezixhobo zetsimbi ezenziwe ngezandla zifanelekile ukuba imibala enjenge: orchid, clove, calla, gerbera, abanturium.
Kwiifestile ezincinci ze-crystal, iintyatyambo ezinama-pedicels ezi-smooth-daffodils, i-nasturtiums, i-hyacinths, i-freesias, ziyamangalisa.
Iipasamic ezilula kunye neebumba zobumba ziyi-godsend ukuba ufuna ukubeka imifuno yasendle kwitafile. Ezi zivayi zifanelekile i-chamomile, i-cornflower, i-lungwort, ungalibala-, kungekudala, i-marigold, i-salvia, i-zinnia.
I-floor ceramic ne-porcelain vases zifuneka kwiintyatyambo ezinkulu - i-gladiolus, i-lily, iris, i-agapanthus, kunye namagatsha e-lilac, imimosa, intlanzi yeentaka, umquba wezolimo, njl.
Ukunika i-bouquet kwi-vase ukujonga okugqityiweyo, ngokuqhelekileyo isebenzisa amahlamvu amnandi. Into eqhelekileyo yimifuno evulekileyo ye-asparagus plumosus, i-gypsophila kunye ne-ivy shoots, amaqabunga e-monster, imithi yesundu, i-begonias. Ilungiselelo lokutsalwa kwemvelo kufuneka likhangele ngokwemvelo, alinakunikwa isikhundla esingafanelekanga kwimeko yayo. Kuyinto enqwenelekayo ukugubungela umgca we-vase kunye nefestile okanye ukudubula.
Ukulungisa iintyatyambo kwi-vase.
Ukulungisa iintyatyambo kwi-vase encinci, sebenzisa amatye okanye isanti. Kwiimeko apho oku akwaneleyo, iziqu zijongwa ngetambo. Kwiindawo ezincinci ezinomsila, iintlobo zeentyatyambo azikwazi ukulungiswa. Kwi-vil cycindrical vase, isetyenziswano esifana nesimo esifanayo, okanye isebe lahlulwe ekupheleni lifakwe kwi-vase. Izitya ezinamanzi ezinamanzi zisebenzise izitho zetsimbi, intambo yocingo efanelekileyo okanye ucingo oluthile.
Amakhankethi kwisitayela se-Art Nouveau
Ukuyila kunye neendawo zangaphakathi kwigumbi lokuhlala
Ekhaya, ecocekileyo kwaye ekhululekile ekhaya
Isitayela seBeedermeier ngaphakathi
Ndingahlamba njani umntwana osandul 'ukuzalwa okokuqala ngqa?
Ziziphi iingxaki eziphakama xa ukhulisa oonyana
I-Spaghetti kunye neminquma kunye neetatayi
Ndimele ndihlambele kangakanani umntwana wam?
Indlela yokuphumelela umntu, ingonyama kwi-horoscope
Izityalo zangaphakathi zomgcini-mgcini